Njem n 'osimiri na Odisha
Chilka Na Golden Triangle Odisha
NKWUKWU NDỊ KWURU ỤLỌ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ
Mmemme 04 nke ehihie
| 017 njegharị
[rev_slider alias = "Chilika Na Triangle Odisha")
Bhubaneswar Onye nlekọta ụlọ ọrụ / yiri Hotel Vits / yiri Hotel The Crown Hotel Mayfair Lagoon
Puri Hotel Naren Palace / yiri Hotel Fort Mahodadhi / yiri Hotel Ananya Resort / yiri Egwuregwu Mayfair
Zute ma na-ekele ya na Sand Pebbles Tour 'n' Ndị nnọchite njem na-abịa na Bhubaneswar Airport / Railway Station na-esote na-agafe na họtel. Mgbe ị gachara, gaa Khandagiri - Udayagiri Jain caves na Nandankanan Zoo (Emechibidoro na Monday). Anyasị - gafere oge ezumike na Ekamra Haat. N'abalị na Bhubaneswar.
Ụtụtụ - mgbe nri ụtụtụ na-aga Puri na-aga eleta Dhauli (Peace Pagoda), Hirapur (Temple 64 Yogini), Pipili (Village Applique Works), Black Pagoda na Konark (Sun Temple), Chandrabhaga Beach & Ramchandi Temple. Nri anyasị na Golden Beach na Market Market nke Puri. N'abalị na Puri.
PURI - ọdọ mmiri CHILAKA - PURI
Nleta ụtụtụ na Onyenwe Jagannath Temple iji soro na Live Aarti Darshan, Gaa na Temple Gundicha na Ụlọ Loknath. Mgbe nri ụtụtụ gara Chilika Lake na Satpada iji lelee Irrawaddy Dolphins na Sea Ọnụ. Gaa n'ụlọ nsọ Alarnath dị na Brahmagiri. N'abalị na Puri.
Ụtụtụ - mgbe nri ụtụtụ gasịrị, laghachi azụ na Bhubaneswar na njem nleta na Raghurajpur (Painting village), Sakshigopal (Ụlọ Nzukọ Radha Krishna), Ụlọ Nzukọ Lingaraj, Ụlọ Nsọ Rajarani, Ụlọ Nzukọ Parsurameswar, Temple Mukteswar na Vaital Temple. N'abalị na Bhubaneswar.
Mgbe nri ụtụtụ na-agafe n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè / ọdụ ụgbọ oloko maka ịga n'ihu.
Ụgbọ njem dị ka usoro ihe omume ahụ.
Ọnụ ọgụgụ niile, ebe a na-adọba ụgbọala & nkwụnye ụgbọala.
AC Dzire maka 02 ndị mmadụ, AC Etios maka 04 ndị mmadụ & AC Innova maka ndị mmadụ 06.
Ulo gụnyere nri ụtụtụ n'ebe niile.
Naanị nri abalị gụnyere na Hotel Mayfair Waves, Puri. (Nri ngwugwu)
01 ime ụlọ abụọ maka ndị 02.
02 ime ụlọ abụọ maka ndị 04.
03 ime ụlọ abụọ maka ndị 06.
Govt bara uru. Ụtụ Service.
Nri dị ka nri ehihie na nri abalị.
Ihe ncheta ncheta, ụgwọ igwefoto, ebubo nduzi.
Ugwo ndi ozo dika ndi ozo.
Ụgbọ ala ụgbọ ala / ụgbọ oloko ọ bụla.
Ihe ọ bụla ekwughị na inclusions.